Automated Email Kushambadzira uye Kubudirira kwayo | Martech Zone
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti isu tine chirongwa chekudonha pane inbound kushambadzira iwe yaunogona kusaina pane yedu saiti (tsvaga iyo yakasvibirira slide mune fomu). Mhedzisiro yeiyo otomatiki email kushambadzira mushandirapamwe inoshamisa - vanopfuura 3,000 vanyoreri vakasaina nevazhinji, vashoma kwazvo vasina kuzvinyoresa. Uye hatina kana kumboshandura maemail kuemail akanaka eHTML izvozvi (iri pane irwo runyorwa rwezvinhu zvekuita). Automated email ndeimwe nzira yatinoda kuramba tichipinda. Hatife takasiya zuva nezuva uye nevhiki tsamba yekushambadzira, asi kuva nesarudzo dzakajairwa nevadzidzi vedu kuti vapinde mune imwe nhaurwa idanho rakanaka ratiri kutsvaga kuongorora.
Email kushambadzira ndiyo tenzi wekushanduka. Kupi kumwe yechinyakare nzira dzekutengesa dzinosara kumashure, email shanduko, inogadzirisa, uye masimba kuburikidza. Gore rakapera, email kupindura kwaive chinhu chikuru chaicho. Vashandisi vaiwana iyo internet vari kure, uye kuti varambe vachitsvaga email kushambadzira vaifanira kuve vanoteerera kune chero uye zvese zvishandiso. Emails haafanire kungova ekuteerera chete, iwo anofanirwa kuve akanongedzerwa, panguva yakakodzera, uye akasarudzika. Adi Toal, Instiller
Mabhizinesi anoshandisa kushambadzira otomatiki kusimudzira tarisiro inosangana ne451% kuwedzera mumatanho akakodzera. Iyo nhamba hombe - uye Instiller yaisa pamwechete iyi infographic izvo zvinopa humbowo hwekuti email automation iri kukanganisa zvakanyanya B2C neB2B kushambadzira kushanda.
Ehezve, otomatiki email haingori yekusarudza-mune yekudonha mushandirapamwe sesu tinayo. Izvo zvinosanganisirawo auto-mhinduro inokonzeresa maemail pamwe ne auto-yakatangwa mishandirapamwe yekudonhedza iyo inokonzereswa kana munhu anonyorera achitora chakati chiito. Yakakonzera mameseji evhareji 70.5% yakakwira yakavhurika mitengo uye 152% yakakwira tinya-kuburikidza nemitero kupfuura bhizinesi semazuva ese kushambadzira mameseji. Sei? Nguva uye kuita zvemunhu zvinoita kuti maemail aya ave iwo akakosha meseji iwe aunogona kutanga otomatiki.
Instiller yakavaka email otomatiki mhinduro inopa zvese zvishandiso zvinodiwa kune vamiririri kuendesa yakakwana email kushambadzira sevhisi kune vatengi. Dynamic automation workflows, autoresponders, mapurogiramu ekugashira, maemail ekuzvarwa, kusimbisa kusetedza, kuteedzera kwakateedzera uye zvine simba zvemukati zvese maficha epuratifomu yavo - zeroing mukati mukubudirira kweemail automation kubva kune yavo infographic!
Tags: adi toalemail emailautomation kuendereraautorespondersemail yekuzvarwakusimbisa kusimbisadonhwe mushandirapamwesimba otomatiki kufambiswa kwebasazvine simba zvemukatiemail kushandisa michinaemail otomatiki kufambiswa kwebasaemail kune vamiririritsambambozha personalizationemail nguvainstillermarketing automationkurudzira mishandirapamwekurairira kuteedzanayakatanga emailgamuchira maemail
Kuvaka Bhizinesi Rako Kupfurikidza Kuteerera Pamhepo